फिल्महरू र टिभी श्रृंखला श्रृंखला ntvpplus अनलाइन टिभी सुरु हुन्छ
"र कोही पनि बनेको छैन" (र विन छैन)
निर्देशकको ट्रिक सफल फ्रेमहरू
"चट्टानको कारणले होटेलको लागि किताबको लागि वाचिंग युद्ध
# Payayhom एक जालसाजी श्रृंखलाहरूको साथ। हामी उत्तम अंग्रेजी टिभी श्रृंखलाको चयन प्रस्तुत गर्दछौं, जुन रमाईलो, स्वादका साथ र असाधारण सुन्दर स्थानहरूमा। कहिले पनि नहट्नुहोस् त्यसैले स्टाइलिश थियो!
प्रसिद्ध प्रसिद्ध छ, प्रख्यात रोमन Atatha क्रिस्टीको आधुनिक अनुकूलनमा केवल 10 वर्ण हो। वास्तवमा तिनीहरूको 11! याद गर्नुहोस्, श्री र श्रीमती ओआईममा रहस्यमय निवासहरू, जसमा तिनीहरू व्यापक दिनको प्रकाशमा मारिन्छन्, र राती अज्ञात व्यक्तिले एकपछि अर्को सिपाहीहरूको तथ्या .्कलाई सफा गर्दछ? क्लासिक दृश्यको सेतो हवेली, इ England ्ल्यान्डमा कतै पुरस्कृत द्वीपमा एक्लो टावर। तुरुन्तै यो स्पष्ट हुन्छ, यहाँ राम्रो कम्पनीलाई राम्रो चीजहरूको लागि भेला गरिएको होइन।
<< p> हवेलीको इंटरीहरू श्रृंखलामा खेल्ने कलाकारहरूको तारा रचना भन्दा कम उल्लेखनीय छैन। अभिनेताहरू - एडन टर्नर, साम नील, चार्ल्स नाच। सिन्टोराइम चित्रकारी, कलाको आवाज कोठामा परिमाणको डिस्चार्दमा, प्रत्येक नायकको विशाल सुनौलो घडी, सैनिकहरूको समय गणना गर्दै, यो एक दया हो जुन जासूसहरूको पात्रहरू हुन्। त्यहाँ पत्ता लागेन।
ठीक, 201 मा, श्रृंखला "भान्छा।। होटलको लागि युद्ध। " मुख्य भूमिका पुन: डेटरी Nagarov पछि प्रदर्शन गरियो, र दर्मिन्ट्री नाजीइवीव, एलेना एक्सटाफोनोभा र मिखोल बशीवरले उनीसँग सामेल भए। यस परियोजना एकदम सफल थियो र दुबै says तुहरू राम्रो रेटिंग्स थिए।
को लागी प्रतिक्षा गर्दै<
यो एक रहस्य होईन र यो तथ्य हो कि "CHENTENT। होटलको लागि युद्ध "सिर्जनाकर्ताहरूका लागि वास्तविक टाउको दुखाइमा परिणत भयो। दोस्रो मौसममा काम मार्च 2020 मा सोची सुरु भयो। यद्यपि, चाँडै रूसमा पूर्ण लोकुशननको लागि समय थियो। नयाँ एपिसोडहरूमा कामबाट मैले धेरै महिनाहरू अस्वीकार गर्नुपर्यो।
<< p> यो सबै समय, निर्माताहरू र सिर्जनाकर्ता समूहले के गर्ने भनेर बुझ्दैनन्। नतिजा स्वरूप, गर्मी द्वारा मात्र काम गर्न सक्षम थियो। अवश्य पनि, यसले प्रीमियरको मितिलाई असर गर्यो। दोस्रो मौसममा पहिले स्क्रिनहरूमा पुग्दा, तर अन्तमा, सेप्टेम्बर 20 20 सम्म पर्खनु पर्यो।
परिणाम स्वरूप, प्रयासहरू व्यर्थ थिएनन्। अन्तिम मौसमले लाखौं दर्शकहरूको स्क्रीनलाई आकर्षित गर्यो। 21 (को प्रत्येक एपिसोड उच्च रेटिंग्स थियो र आलोचकहरूको राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त भयो।
<< p> यो कुनै गोप्य छैन कि श्रृंखलाको प्लट "किचन" एक सम्पन्न रेस्टुरेन्टमा विकसित हुँदैछ। यद्यपि उत्पादनहरूसँग काम गर्नुहोस् प्रायः रचनात्मक समूहका लागि गाह्रो हुन्छ। त्यसोभए, केहि भाँडाहरू धेरै पटक र प्रत्येक नयाँ दृश्यको लागि डिफ्रिस्ट गर्नुपर्यो। यसको कारणले गर्दा, उत्पादनहरूले आफ्नो गुण हरायो, र डिश नै नेप्सेटेन देख्दछ। यस्तो अवस्थामा निर्देशकहरूले धेरै प्रयास गर्नु आवश्यक छ ताकि खाना फ्रेममा सकेसम्म आकर्षक देखिन्थ्यो।
पनि श्रृंखलामा पनि त्यस्ता क्षणहरू छन् जब पात्रहरूले खानाको साथ जटिल विकृतिहरू प्रदर्शन गर्छन्। तपाईं त्यस्ता अभिनेताहरूलाई धेरै लामो समयका लागि मात्र सिकाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण कलाकारहरूको त्यस्ता फ्रेममा पेशेवर शेफहरूमा प्रतिस्थापन गरियो। निर्देशकले मालिकको हातहरू कब्जा गर्दै, केवल मालिकहरूको हातहरू कब्जा गर्दै, र उनीहरूको अनुहार होइन।
माथि यो पहिले नै उल्लेख गरिएको थियो कि दोस्रो सत्रमा काम "भान्छा। होटेलको लागि युद्ध "कोरोनरसको कारण रोकियो। तर सृष्टिकर्ताले कस्ता कठिनाइहरूको सामना गरे? सर्वप्रथम, अभिनेताहरू र एक रचनात्मक समूहको बीचमा संक्रमण रोक्न को लागी सबै सेनेटरी मापदण्डको पालना गर्न आवश्यक थियो। त्यसकारण विज्ञहरूले विनिमय सुरु nel स्थापना गरेका छन्। तिनीहरूले यस फिल्म चालकका सबै सदस्यहरूमा पनि पछ्याए र व्यक्तिगत सुरक्षाको माध्यमबाट साइटमा उपस्थितहरूलाई प्रदान गरे।
दोस्रो, जाडोमा विकसित, र शूटिंग गर्मीमा मात्र फेरि पुनः सुरु भएको थियो। त्यसकारण कलाकारहरूले चालीस-पोर्टस गर्मीमा फर कोट र क्याप्स लगाउनुपर्यो, दिन र रातको लागि गर्मी सोचीमा जाडोको वातावरण सिर्जना गर्न।
<<< << तेस्रो, कोरोनवर्रको कारण सृष्टिकर्ताले दुई पटक सेट गर्नुपर्थ्यो: ती मध्ये एक सोची सोचीमा अवस्थित थियो। महानगरीय बनावटमा पनि चट्टानको भाग पुन: उत्पादन गर्थे, जससँग धेरै दृश्यहरू हुन्छन्। त्यहाँ होटल को मनोरञ्जनात्मक सजावट पनि थिए। एकै समयमा, दर्शकहरूलाई ठूला शहरहरू फ्रेममा देखा पर्दछ याद पनि गरेनन्।
छुट्टै, म शोकको अन्तिम मौसममा रहेको ग्रीष्म in तुको गर्मी सर्तमा हिउँदको शुटिंग उल्लेख गर्न चाहन्छु। होटलको लागि युद्ध। " मस्कोबाट यथार्थपरकको लागि कृत्रिम हिउँले निरन्तर ल्याइयो। र यो हिउँ फिलरबाट बनेको छ। डायपरका लागि! डायपरहरूको प्याकिंगबाट, त्यहाँ "हिउँ" को चारै बाल्टिनहरू भन्दा पूर्णांक थिए। सडकमा प्रत्येक दृश्य होशियारीपूर्वक तयारी गर्दै थियो: दृश्यहरू र विवरणहरूमा कलाकारहरू जताततै छरिएका थिए।